Shiinaha Dambiisha Boorsada Shirkadaha - Jumlada & Iibinta Qiimaha Dhimista Xafaayadda - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Boorsooyin>Bacda xafaayadda
(1) Shandaddan bacda xafaayaddu ka samaysan tahay waa 290T dhar isku-jira oo dhar ah. Dusha sare waxaa lagu daboolay daahan biyaha celiya. Waxay leedahay sifooyin xoog leh oo biyo-sifeyn ah waxayna si wax ku ool ah uga hortagi kartaa roobka inuu ku qoyo gudaha bacda xafaayadda waqti gaaban. Dharkani wuxuu leeyahay astaamo ay ka mid yihiin iska caabbinta iyo dareenka gacmaha oo aad u fiican. (2) 230T twill maro Oxford ah ayaa lagu isticmaalaa gudaha, kaas oo leh xoog is jiidjiid iyo dareen. , Boorsooyinka lagu keydiyo toy-yada, boorsooyinka taangiga caanaha lagu keydiyo iyo bacaha keydinta kuleylka. Dibedda waxaa loogu talagalay boorsooyinka wax lagu kaydiyo ee shaqeynaya, sida boorsooyinka lagu keydiyo boorsada, bacaha lagu keydiyo parasol iyo boorsooyinka keydka tuugga ee looga hortago tu......